ရော့ချသီတငျးပါတျကို သိမျးပိုကျခဲ့သူ မွနျမာအိုငျဒေါပွိုငျပှဲဝငျ အကျစတာ ဒေါ့သျခငျြးဆုနျ(ရုပျသံ) – Sashalin
ရော့ချသီတငျးပါတျကို သိမျးပိုကျခဲ့သူ မွနျမာအိုငျဒေါပွိုငျပှဲဝငျ အကျစတာ ဒေါ့သျခငျြးဆုနျ(ရုပျသံ)
November 8, 2019 admin Celebrities 0
“ဟေ့ လှမျးပွီး ကွညျ့တယျ… မငျး မကျြလုံးတှေ ဘယျလိုလဲ… ရငျကိုဖှငျ့ လိုကျ စမျး… နှုတျခမျးလေး ရဲရဲရငျ့ရငျ့… ဖှငျ့ဟလိုကျပါ ဟနျမဆောငျနဲ့… ရငျဖှငျ့လို့ ပွော လိုကျစမျး… ညတိုငျးပဲ မငျးလေး… အိပျမကျမကျတာ ဘယျသူလဲ… ရငျကိုဖှငျ့လိုကျစမျး”
ဒါကတော့ တခြိနျက ရော့ချသီခငျြးတှနေဲ့ ဂီတလောကမှာ နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ ကျောနီ ရဲ့ “ရငျကိုဖှငျ့လိုကျစမျး”သီခငျြးထဲက တေးသှားတှဖွေဈပွီး ခုတခါမှာတော့ မွနျမာအိုငျ ဒေါရဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျတဦးက စငျမွငျ့ထကျမှာ ပုံစံတမြိုးနဲ့ ဖြျောဖွမှေုကို ပရိသတျတှကေ ရှု စားခဲ့ကွရတာပါ။
ပရိသတျအားပေးမှု အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ နာမညျကွီးသီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲတခုဖွဈတဲ့ မွနျမာအိုငျဒေါ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ Season4ရော့ချသီတငျးပါတျကိုတော့ မနညေ့က ကငျြးပခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲဝငျ ၁၀ ဦးက အကွိတျအနယျ ယှဉျပွိုငျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ကျောနီရဲ့ “ရငျကိုဖှငျ့လိုကျစမျး”သီခငျြးနဲ့ ယှဉျပွိုငျခဲ့သူကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ Performance Show မှာ ပရိသတျပေးတဲ့ Voting အမြားဆုံးနဲ့ နောကျတဆငျ့ တကျလှမျး နိုငျခဲ့တဲ့ အကျစတာဒေါ့သျခငျြးဆုနျပဲ ဖွဈပါတယျ။
“ဦးနှောကျထဲ မငျး အမွဲ ရေးသားထားတာ… ဘယျသူ့နာမညျလဲ… မငျးလေးဖှငျ့ ပွောစမျး… ရငျကို ဖှငျ့ လိုကျစမျး… ဖှကျထားတဲ့ နှလုံးသားလေး… ထုတျပွလိုကျဟေ့… ရငျကိုဖှငျ့ လိုကျစမျး… အခဈြရဲ့ သဲလှနျစမြား အားလုံးပဲ… မငျး မကျြလုံးထဲ တို့မွငျနေ… မငျးလေးဖှငျ့ပွောစမျး”
ခငျြးတိုငျးရငျးသူလေး အကျစတာဟာ ဒီသီခငျြးကို သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျဟနျနဲ့ လှလှပပ သီဆိုပွသှားခဲ့ပွီး မွူးကွှတဲ့ မယျလိုဒီတေးသှားတှနေဲ့အတူ ဒိုငျတှကေိုရော ပရိသတျတှေ ကိုပါ သီခငျြးဆုံးတဲ့ အခြိနျထိ ဖမျးစားထားနိုငျခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။
အကျစတာရဲ့ Voting No. ကတော့ 77708 ဖွဈပွီး ဒီကနညေ့နေ ၆ နာရီအထိ မဲ ပေးရှေးခယျြ အားပေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
“ဟေ့ လှမ်းပြီး ကြည့်တယ်… မင်း မျက်လုံးတွေ ဘယ်လိုလဲ… ရင်ကိုဖွင့် လိုက် စမ်း… နှုတ်ခမ်းလေး ရဲရဲရင့်ရင့်… ဖွင့်ဟလိုက်ပါ ဟန်မဆောင်နဲ့… ရင်ဖွင့်လို့ ပြော လိုက်စမ်း… ညတိုင်းပဲ မင်းလေး… အိပ်မက်မက်တာ ဘယ်သူလဲ… ရင်ကိုဖွင့်လိုက်စမ်း”
ဒါကတော့ တချိန်က ရော့ခ်သီချင်းတွေနဲ့ ဂီတလောကမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ကော်နီ ရဲ့ “ရင်ကိုဖွင့်လိုက်စမ်း”သီချင်းထဲက တေးသွားတွေဖြစ်ပြီး ခုတခါမှာတော့ မြန်မာအိုင် ဒေါရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးက စင်မြင့်ထက်မှာ ပုံစံတမျိုးနဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကို ပရိသတ်တွေက ရှု စားခဲ့ကြရတာပါ။
ပရိသတ်အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ Season4ရော့ခ်သီတင်းပါတ်ကိုတော့ မနေ့ညက ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၀ ဦးက အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကော်နီရဲ့ “ရင်ကိုဖွင့်လိုက်စမ်း”သီချင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ Performance Show မှာ ပရိသတ်ပေးတဲ့ Voting အများဆုံးနဲ့ နောက်တဆင့် တက်လှမ်း နိုင်ခဲ့တဲ့ အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဦးနှောက်ထဲ မင်း အမြဲ ရေးသားထားတာ… ဘယ်သူ့နာမည်လဲ… မင်းလေးဖွင့် ပြောစမ်း… ရင်ကို ဖွင့် လိုက်စမ်း… ဖွက်ထားတဲ့ နှလုံးသားလေး… ထုတ်ပြလိုက်ဟေ့… ရင်ကိုဖွင့် လိုက်စမ်း… အချစ်ရဲ့ သဲလွန်စများ အားလုံးပဲ… မင်း မျက်လုံးထဲ တို့မြင်နေ… မင်းလေးဖွင့်ပြောစမ်း”
ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး အက်စတာဟာ ဒီသီချင်းကို သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ လှလှပပ သီဆိုပြသွားခဲ့ပြီး မြူးကြွတဲ့ မယ်လိုဒီတေးသွားတွေနဲ့အတူ ဒိုင်တွေကိုရော ပရိသတ်တွေ ကိုပါ သီချင်းဆုံးတဲ့ အချိန်ထိ ဖမ်းစားထားနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Myanmar Idol Season4သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ ဒိုင်တွေအနေနဲ့ အခုနှစ်မှာတော့ အ ဆိုတော် အောင်ကိုလတ်၊ တင်ဇာမော်နဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့က အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးနေ ကြတာဖြစ်ပြီး Host အနေနဲ့ Myanmar Idol Season ၃ ခုလုံးမှာ ပါဝင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ ကျော်ထက်အောင်က တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။
လတ်တလောမှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို မဲပေးရွေးချယ်နိုင်မယ့် Voting Line တွေ ကို ဖွင့်ထားပေးပြီး MPT, Ooredoo နဲ့ Mytel စတဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖုန်းလိုင်းတွေက တဆင့်လည်း Vote ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အက်စတာရဲ့ Voting No. ကတော့ 77708 ဖြစ်ပြီး ဒီကနေ့ညနေ ၆ နာရီအထိ မဲ ပေးရွေးချယ် အားပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Top Finalists ၁၁ ယောက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပါတ် Performance Show မှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲက ခြူးစစ်ဟန်က ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတာမို့ ခုညနေ Result Show မှာရော ဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေက နောက်တဆင့် တက်သွားမလဲ၊ ဘယ်သူတွေကတော့ ပြိုင်ပွဲကနေ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားရမလဲဆိုတာကိုတော့ စောင့် မျှော်ကြည့်ရှုကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးတော့ထူးပွီ.. ကုနျးဖွိုရာမှ မွပွေို၍ ဂူတှရှေိ့ရာ ဂူထဲတှငျ ရှေးဟောငျးရုပျထုတှေ တှရှေိ့ ရုပျသံဖိုငျကွညျ့ရနျ )